ICanada iBlackBerry Glass ijoyina i-bandwagon ye 'wearable' yeenkampani | Iindaba zeGajethi
ICanada iBlackBerry Glass ijoyina i-bandwagon ye 'wearable' yeenkampani
Iiglasi ezifanelekileyo zifuna ithuba lesibini. Sibonile ukuba imodeli kaGoogle -Iglasi kaGoogle- yayinomdla omncinci. Nangona kunjalo, ushicilelo lwesibini lunokuba nemveliso engaphezulu. Ingakumbi ukuba sithetha ngokusetyenziswa kobuchwephesha ngakumbi.
Ngoku, inkampani eyenza iiglasi ezifanelekileyo, iVuzix, ifumene iqabane elihle: iBlackBerry. Kwaye inkampani yaseCanada ibonakala ngathi ifuna ukuzihlaziya ngokupheleleyo kunye nokubheja kwiimarike ezininzi ukongeza kwiifowuni ezi-smart ngoku ezisekwe kwi-Android. Kwaye kungcono kunamaglasi okusebenzisa ubungcali. Le yindlela i-BlackBerry Glass eyazalwa ngayo.
Ukuhamba nevidiyo yokubonisa, ukusetyenziswa kwezi glasi zi-smart kuyacaca: akukho nto yomsebenzisi othile, kodwa yonke into ijolise kwinkampani. Ividiyo iqala ngokuqaqambisa ukuba xa sijonga izixhobo ze-elektroniki okanye incwadi yokubhalela, kukho idatha engaphaya enokusiphazamisa. Nangona kunjalo, ngokusetyenziswa kwezi zixhobo, ingqalelo yakho iya kugxila kwinto ebalulekileyo: kulwazi.
Ke bayasibonisa iimeko ezahlukeneyo apho iBlackBerry Glass inokunceda khona. Ugqirha kwimeko kaxakeka kufuneka abeke esweni imeko yesigulana: ukubetha kwentliziyo kunye noxinzelelo, njengomphathi ophambi kwekhompyuter eofisini yakhe kwaye angayifumana ngexesha lokwenyani into eyenziwa liqela lakhe kwindawo yomsitho. Kwimeko yokugqibela, kuya kuba lula kakhulu ukunika imiyalelo.
IBlackBerry Glass isekwe kwimodeli yeVuzix M300, imodeli esele inayo inkampani kwikhathalogu yayo. Kwaye wayefuna ukumilisela kwakhona ngeBlackBerry, kuba umphathi wayo wangoku (uJohn Chen) wagqabaza kwiminyaka eyadlulayo ukuba unomdla kwintengiso wearables. Ukongeza, iBlackBerry yinkampani ebisoloko iziva ingcono phakathi kweenkampani kunabantu, nangona kwiminyaka embalwa edlulileyo ifikelele ekuthandeni ngokuthandekayo phakathi kwabasebenzisi ngenxa ye-BlackBerry Messenger yayo.
Okokugqibela hayi Kugwetyelwe ngaphandle ukuba inkampani yaseCanada ifumana izixhobo ezingaphezulu zale ndlela (IBlackBerry Glass) kwixa elizayo ngaphandle kokuba ibe ngabadali, kodwa enkosi kwizivumelwano nabantu besithathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » ICanada iBlackBerry Glass ijoyina i-bandwagon ye 'wearable' yeenkampani